China Solar Street Iju mmiri ọkụ n'èzí oriọna 6500K na Remote Control dusk ka Dawn Security Lighting maka Yard Garden Gutter Basketball Court emepụta na suppliers | Kasem
Iju mmiri n'okporo ámá nke anyanwụ na-enwu oriọna dị n'èzí 6500K nwere ebe njikwa anya na-enwu ọkụ ruo Dawn Security Light maka ụlọ ikpe basketball nke Yard Garden Gutter
Agba okpomọkụ: 6500K
Ike batrị: 10000mAh
Oge nchaji: 5-8 awa
Oge ọkụ n'okporo ámá anyanwụ na-arụ ọrụ: awa 10-15 ka agbachara ya kpamkpam
Ebe njikwa anya: 26 ụkwụ
Ogo mkpuchi mmiri: IP66
Na-arụ ọrụ okpomọkụ: -25 ℃-60 ℃
Akụkụ anyanwụ: 23.2*23.2*35CM
Ogo ahụ: 20.8*40.3CM
Ìhè okporo ụzọ anyanwụ n'èzí site n'isi ụtụtụ ruo chi ọbụbọ- Ìhè okporo ụzọ anwụ nke 100W nwere ihe mmetụta fotoelectric arụnyere arụnyere, nke na-agbanye ozugbo na mgbede wee gbanyụọ n'isi ụtụtụ.
Ìhè Iju mmiri nke anwụ na-eji 5V15W ncha ọkụ anyanwụ na-arụ ọrụ nke ọma, nke enwere ike ịgbanye ya kpamkpam n'ime awa 5-8 n'okpuru anyanwụ, nke kwụsiri ike.
Igwe ọkụ n'èzí nke Solar Led nwere batrị ike ụgbọ ala arụnyere 3.2v/10000mAh, nke dị mma ma kwụsie ike. Ọ nwere ike na-enwu maka ihe dị ka awa 13 na ọnọdụ kacha na-egbukepụ egbukepụ, ọ nwere ike na-enwu maka ihe dị ka awa 30 na ọnọdụ ọchịchịrị.
100W n'èzí na-egbukepụ egbukepụ ọkụ ọkụ anyanwụ nke nwere 100 LED oriọna nwere ike iru 10,000 lumens, nke nwere ike gboo mkpa nke nnukwu ebe.
Njikwa ọgụgụ isi-Ụdị ọkụ anyanwụ a site na mgbede ruo chi ọbụbọ nwere ụzọ njikwa abụọ:
1.Light njikwa: na-akpaghị aka na-agbanye na mgbede ma gbanyụọ na chi ọbụbọ.
2. Njikwa dịpụrụ adịpụ: Ị nwere ike iji njikwa anya na-amanye mgba ọkụ, tọọ oge elekere 3/5/8, setịpụ ụdị ọkụ ọkụ 9 nke ìhè ahụ, enwere ike gbanwee nchapụta ahụ n'efu.
Ọ dị mfe ịwụnye: Enwere ụzọ abụọ iji wụnye ọkụ n'okporo ámá anyanwụ: enwere ike itinye ya na mgbidi (nke a na-eji skru na-agbanye). Enwere ike itinye ya n'osisi nwere dayameta nke 2 ruo 4 sentimita (nke ejiri ngwa nkwụnye na kposara). Ọ bụ enweghị mmezi na ntụkwasị obi, na-enweghị wiring ma ọ bụ trenches, nke dị mma na enweghị mmetọ.
- Gbanyụọ n'ehihie iji nweta ìhè anyanwụ, ma na-enwu na-akpaghị aka n'abalị, enwere ike gbanyụọ ya site na njikwa anya (ụgwọ ọkụ eletrik efu n'afọ niile)
- Batrị lithium arụnyere arụnyere, enweghị mmetọ, nchekwa ike na ndụ ogologo oge, na-abịa na njikwa ime obodo.
- Waterproof, enweghị mmetọ, uzuzu uzuzu na inogide, elu okpomọkụ na-eguzogide na ogologo ndụ ọrụ.
- Enwere ike ịtọ oge ọkwa 2 dị ka mkpa gị si dị, na-arụ ọrụ ogologo oge na nchapụta dị ala.
- Ụzọ 2 iji wụnye ya, enwere ike itinye ya na ogwe osisi nwere dayameta nke 2 ruo 4inch ma ọ bụ na mgbidi.
0 Ụgwọ ọkụ eletrik:Oghere aluminom anwụ-na-anwụ anwụ na ogwe igwe dị elu nke ọma, gbanye ma gbanyụọ n'isi ụtụtụ na chi ọbụbọ. Eletrik niile sitere na ike anyanwụ, 100% nchekwa ike. IP65 nwere ike na-agba ọsọ nke ọma ọbụna na mmiri ozuzo
1 * ọkụ okporo ụzọ anyanwụ.
1 * anyanwụ panel.
1 * nkwado nkwado.
1 * set nke ngwa mgbakwunye.
1 * remote njikwa (batrị gụnyere)
Nke gara aga: Nzọụkwụ 3 LED kwadoro anyanwụ na-enwu ọkụ n'èzí igwe anaghị agba nchara maka nzọụkwụ nzọụkwụ Patio stair Auto Onoff
Osote: Ọkụ n'èzí nke ọgbara ọhụrụ dị na ọkụ 2 nwere matte Black Aluminom Cylinder na iko ọkụ.
20Hours Lightiung 300W oriọna Iju mmiri jikọtara Le...
Ihe mmetụta sensọ Streetlight ABS Waterproof IP65 1...